Deeqaha Horumarinta Wajiga ee Meheradaha Dutchtown • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Isticmaal foomka hoose, ama buuxi codsigan PDF oo u dir info@dutchtownstl.org.
magaca ganacsiga *
Cinwaanka Meheradda *
Macluumaadka Xiriirka Koowaad
Magaca la xiriir *
La xiriir telefoonka
Sharaxaada Mashruuca iyo Qiimaha
Bixi sharaxaad kooban oo qoran oo ku saabsan mashruucaaga hagaajinta ee qorshaysan.
Taariikhda Bilowga la saadaaliyay *
Taariikhda Dhamaystirka la saadaaliyay *
Dukumiintiyada Soo Baxa
Ku dar sawiro ka hor, sawiro dhiirigelin ah ama bandhigyo, warqadaha mulkiilayaasha hantida, ama dukumeenti kasta oo kale oo khuseeya.
Liiska Hubinta Codsadaha iyo Saxeexa
Waxaan ku daray ka hor sawiro. Waxaan ku daray naqshadaynta lagu dabaqi karo, sawiro dhiirigelin ah, iyo qiyaasaha shaqada la soo jeediyay. Mashruucaygu wuxuu wanaajin doonaa weji-wado u jeedda dhismaha aan ka dhex shaqeeyo. Waxaan fahamsanahay in shaqadu ay bilaabanto 90 maalmood gudahooda laga bilaabo oggolaanshaha ku meel gaarka ah. Waxaan fahamsanahay in mashruuca lagu dhammeeyo lix bilood gudahood laga bilaabo oggolaanshaha deeqda. Waxaan fahamsanahay in maalgelinta deeqda lagu bixiyo lacag celin kaliya. Waxaan ku daray warqad saxeexan oo ka yimid mulkiilaha dhismaha (haddii ay khuseyso).
Halkaan ku sawir saxiixaaga.
Barowsarkaaga ma taageerayo goobta e-Saxiixa
Taariikhda La Saxiixay
Soo Gudbi Codsigaaga
DutchtownSTL.org Ganacsi Deeqaha Hagaajinta Facade ee Meheradaha Dutchtown